Ogaden News Agency (ONA) – Hoggaanka Arrimaha Dibada ee ONLF oo kulan la yeeshay Ururada Bulshada Perth, Australia
Hoggaanka Arrimaha Dibada ee ONLF oo kulan la yeeshay Ururada Bulshada Perth, Australia
Cabdiraxmaan Sh Mahdi Hoggaanka HAD oo Socdaal hawleed ku maraya wadanka Australiya ayaa kulan la yeeshay ururka dhalinta OYSU Perth, kulankaas oo kadhacay magalada Perth ee cariga Australia. Kulanka oo ahaa mid aad iyo aad u heersareeya ayaa waxaa soo qaban qaabiyey ururka dhalinyarada iyo ardayda S.Ogadenia (OYSU).
Waxaa Hoggaanka Arrimaha dibada kulankan ku wehelinayay masuliyin kale oo ka tirsan Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya.
Kulanka ayaa lagu furay Aayadaha Quraanaka Kariimka ah, ka dibna xoghayaha ururka OYSU-Perth Axmed Sheekh Aadan ayaa halkaas warbixin kooban kasoo jeediyay kana xogawaramay waxqabadka ururka khaasatan bilihii oogu danbeeyay. Xoghayuhu waxa uu ka hadlay guulaha lataaban karo ee ururka OYSU Perth ku guulaysteen mudadii oogu danbaysay haday noqon lahayd isku xirka bulshada, baraarujinta dhibaatooyinka kajira Ogadenia iyo wiliba sidii laysaga kaashan lahaa caqabadaha horyaala umada S.Ogadeniya.
Hadalo kooban oo xubnaha Ururka OYSU ay kusoo dhaweynayaan Hoggaanka Arrimah dibada kadib iyo xogag laxidhiidha shaqooyinka Ururka OYSU Perth, ayaa waxa lagusoo dhaweyay Hoggaanka Arrimaha Dibada JWXO Dr Cabdiraxmaan Mahdi.
Cabdiraxmaan sheekh Mahdi oo ka ka mid ah asaasayaasha jabhadda ONLF ayaa sidoo kale ahaa Xubinihii asaasay ururkii dhalinyarada ee WSLF shaqooyin badan iyo masuuliyadona kasoo qabtay hawlihii dhalinyarada ee waagaa oo ahaa sidii ay dhulkooda hooyo uga xoreyn lahayen gumeysiga madow. Gudoomiyaha Arimaha Dobadda mudane C/raxmaan ayaa ka soo jeediyay kulanka warbixin dheer oo cilmiyaysan oo ku aadan shaqooyinka laga doonayo inay qabtaan Ururka Dhalinta khaastan kuwa gobanimo doon iyo nidaamyada ay maraan. Wuxuu Hoggaanku aad u amaanay dhalinta OYSU meelkasta oo ay caalamka ka joogaan waxuuna ku amaanay shaqada wanaagsan ee muuqata ay ka fuliyaan qaaradaha Adduunka. Si gooni ah waxa uu uga hadlay sida uu ugu faraxsanyahay dhalinta Perth ee OYSU dhismahooda iyo shaqooyinki ay qabteen ee ay la wadagaan.
Hogaamiyaha oo hadalkiisii sii wata ayaa ku tilmaamay dhalinyaradu in ay tahay madaxdii barito loogana baahanyahay in waxqabadkooda sii laban laabaan asaga oo sheegay in uu aad iyo aad oogu faraxsan yahay sida wanaagsan ee ay uga hana qaadeen da’yarta S.Ogadenia dhamaanba caalmka dacaladiisa.
Waxa kale oo Hoggaanku xog faahfaahsan kasiiyay halganka Somalida Ogadeniya iyo maanta kaalinta ay dhalinyaradu ku leedahay. Siyaasadaha isbadalay ee caalamka iyo Gumeysiga sii dhacaya tabihiisa gumeysi. waxa kale oo uu xog kasiiyay dhalinta ciidanka JWXO iyo fariimo badan oo ka aadan gudaha Ogadeniya.
Oogu danbayntii, xubnihii madasha fadhiyay ayaa fursad u helay in ay dareenkooda cabiraan isla markaana su’aallo waydiyaan mudane Maadey kuwaas oo kuwajahnaa xaalada guud ee kajirta Ogadenia.
Hogaanka Dibada ee JWXO Dr Cabdiraxmaan (Maaday) ayaa safaro ku maraya wadanka Australiya halkaas oo uu wareeg dheer oo jaaliyadaha Somalida Ogadeniya uu kula kulmi doono gobolada Pacific.
Wixii kalee kasoo kordha safarka Dr Maadeey kala soco shabakada Ogaden News Agency (ONA)